Fepetra fiarovana ny seranan-tsambo : manaraka ny satan’ny ISPS ny lalàna misy | NewsMada
Fepetra fiarovana ny seranan-tsambo : manaraka ny satan’ny ISPS ny lalàna misy
Mikaroka fepetra hafa indray ny fanjakana mikasika ny fiarovana sy ny aro loza eny amin’ny seranan-tsambo. Tsy nohajaina ny fifanarahana fiaraha-midinika amin’ny tsy miankina, sady efa misy rahateo ny fepetra manan-kery mifanaraka amin’ny sata iraisam-pirenena ISPS.
Araka ny fanazavana nomen’ny manampahaizana teknisianina iray mikasika ny fitaterana an-dranomasina, misy ny fepetra samihafa arahin’ny sambo sy ny fotodrafitrasa eny amin’ny seranan-tsambo, mikasika ny fiarovana sy ny aro loza. Nametraka azy ny Antokon-draharaha mitantana ny seranan-tsambo sy ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy (APMF), mifanaraka amin’ny sata iraisam-pirenena ISPS. Nozarain’ny APMF ny antontan-taratasy sy ny drafitrasa manara-dalàna na Document de conformité (Doc) avokoa ny seranan-tsambo iraisam-pirenena eto Madagasikara, milaza ny fanaraham-penitr’izy ireo araka izay voasoratra ao anatin’ny satan’ny ISPS. Manampy ireo, hita any anatin’ny siteweb GISIS an’ny Fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny fitaterana an-dranomasina (OMI) avokoa ireo seranan-tsambo iraisam-pirenena eto amintsika, manamarina ny maha ara-dalàna azy ireo.
Tsy nohajaina ny fiaraha-midinika
Koa, mahavariana raha amin’izao vanim-potoana izao, tadiavin’ny fanjakana averina samirery indray, ilay karazan-ketra manokana, mifanahantsahana amin’ny Advance cargo declaration (ACD). Tsy ratsy ny fanavaozana ny lalàna, saingy tsy tokony hohadinoina fa nisy ny fifanarahana iombonana teo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina, amin’ny iaraha-midinika amin’izay fanapahan-kevitra hatao sy horaisina. Tsy nohajaina anefa izany, na nisy mihitsy aza ny vaomiera iombonan’ny roa tonta natsangana. Efa nahavita ny fihaonany ny samy tsy miankina.
Tsy niraharaha ireo voalaza ireo mihitsy ilay fehin-teny fanazavana avy any amin’ny APMF, voalaza etsy ambony, sady tsy hita koa ny fanehoan-kevitra avy any amin’ny governemanta. Midika izany fa tsy misy ny fifampitokisana ary tandindomin-doza ny fifampidinihan’ny fanjakana sy ny tsy miankina.
Andrasan’ny sehatra tsy miankina ny fanajan’ny filohan’ny Repoblika ny teny nomeny. Tsy maintsy ao anatin’ny fifampidinihana ihany no ahafahana mametraka lamina amin’ny fiarovana ny seranan-tsambo, araka ny sonia niarahana natao ny 1 marsa 2016.